6 Tilmaamood oo ku saabsan wax-u-iibsiga saxda ah ee Adobe Photoshop | Abuurista khadka tooska ah
6 Tilmaamid ku saabsan Goynta Saxan ee Adobe Photoshop
ka goynta saxda ah ee Adobe Photoshop Iyagu waa mid ka mid ah mawduucyada xiddig ee ka dhexjira sawir qaadeyaasha. Mawduuc aan inta badan ka hadalnay dhanka loo yaqaan 'Creativos Online'. Maanta waxaan dib u eegeynaa dhammaan laylisyada iyo talooyinka aan kuu soo diyaarinay. Cusbooneysiinta xusuustaada waligeed ma dhaawaceyso, gaar ahaan marka laga hadlayo shaqooyinka sida caadiga ah sida tan oo kale.
Iyaga ku raaxee!
Isku soo bixid adag oo sax ah ayaa ka mid ah waxyaabaha waqtiga badan ku lumiya naqshadeeye iyo madax xanuunka ugu badan ee ay ku toosaan karaan. Waxaa jira farsamooyin kala duwan dhammaantoodna way ansax noqon karaan haddii aan baranno inaan ka faa'iideysano dhammaan fursadaha uu dalabku na siin karo. Waa arrin tijaabo ah oo wax la iska weydiiyaa.
Qaababka isku dhafan ayaa badanaa la iska indhatiraa, gaar ahaan goynta saxda iyo jarista geeddi-socodka. Laakiin waa lagama maarmaan inaan ognahay suurtagalnimada ay noogu deeqi karaan xaaladaha qaarkood maxaa yeelay waxay naga badbaadin karaan waqti badan. Gaar ah shan daqiiqo sera waa waxa igu horseeday in aan ka shaqeeyo mid kasta oo ka mid ah tusaalooyinka aan soo jeedinayo.
Gaar ahaan adduunka maqalka, farsamada furaha chroma ayaa loo isticmaalaa. Farsamadan waxay ka kooban tahay dhigista mawduuca ama shayga hore ee asalka oo leh asalka midab isu eg, guud ahaan cagaar ama buluug (waxay kuxirantahay labiska jilaaga). Waxa ay sameeyaan waa inay ku toogtaan maradan asalka ah ka dibna ay ku soo saaraan iyaga oo adeegsanaya qalabka wax lagu beddelo sida Adobe After Effects.
Mid ka mid ah khiyaanooyinka ugu jaban uguna awoodda badan (qalabkan xaaladdiisa) si looga gudbo caqabadaha iyo dhibaatooyinkayaga markay tahay soo saarista walxaha ku jira halabuurkeenna ayaa ah qoraalka aasaasiga ah. Waxaad ka heli kartaa qalabkan kooxda qabyada ah ee sanduuqa agtiisa waxayna leedahay dhawr ikhtiyaar iyo dejin aan ku beddeli karno isticmaalka ugu habboon. soo saarista adag. Labadan fiidiyow waxaan dib u eegi doonnaa dhammaan howlaha iyo kartida ay bixiso.
Markan waxaan eegeynaa qalabka sixirka tirtira, oo si macquul ah ugu dhex jira kooxda qalabka tirtiraha. Waa beddel aad u xiiso badan oo faa'iido u yeelan kara xaalado badan, in kasta oo run ahaantii ay aad uga badan tahay tirtiridda sanduuqa, waa aalad aan ku aragnay fiidiyowgii hore.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » 6 Tilmaamid ku saabsan Goynta Saxan ee Adobe Photoshop
David rieri dijo
Isku soo duub weyn oo aad u faa'iido badan. Immisa jeer ayaan ku badbaadin lahaa fiidiyowyadan in yar ka hor ...
Jawaab David Rieri
john James parra ocampo dijo
Aad u xiiso badan, mahadsanid
Jawaab john james parra ocampo
5 rinjiyeyaasha dhabta ah ee ka soo maray cilladaha maskaxda
Astrophotography: Waa socod ka gudubsan bannaanka hore